सुदूरपश्चिममा अन्तरपार्टी निर्देशन लागू नभएको भन्दै भीम रावलको आपत्ति « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
सुदूरपश्चिममा अन्तरपार्टी निर्देशन लागू नभएको भन्दै भीम रावलको आपत्ति
प्रकाशित मिति : २०७८, २३ कार्तिक मंगलवार ११:०४
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको बैठकप्रति आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार ट्वीट गर्दै उपाध्यक्ष रावलले १० बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । एमाले सुदूरपश्चिम कमिटीको बैठक आज बोलाइएको छ ।
उनले लेखेका छन्, ‘आज हुने भनिएको कथित सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको बैठक १० बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि जारी अपानि १२ को विपरीत छ । यो गुटबन्दीको नमूना हो । यो बैठक र यसका निर्णयहरू अवैध र अमान्य छन् । अपानि १२ झापामा लागू हुने, सुदूरपश्चिममा लागू नहुने किन ? यहाँको भूमि वाह्य अतिक्रमणमा परेकोले हो कि ?’
आज हुने भनिएको कथित सु.प. प्रदेश कमिटीको बैठक १० बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि जारी अपानि १२ को विपरीत छ।यो गुटबन्दीको नमूना हो।यो बैठक र यसका निर्णयहरू अवैध र अमान्य छन्।अपानि १२ झापामा लागु हुने, सु.प.मा लागु नहुने किन? यहाँको भूमि वाह्य अतिक्रमणमा परेकोले हो कि?
— Dr. Bhim Rawal (@BhimRawal179) November 9, 2021
सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा यसरी मनाइयो गणतन्त्र दिवस (फोटो फिचर)